lundi, 15 mars 2021 17:31
Grevy Ankatso : Mpianatra 2 nahiditra hopitaly
Vokatry ny fandravan'ny mpitandro ny filaminana ny grevin'ny mpianatra, nitaky ny vatsim-pianarana 5 volana, dia mpianatra 2, Hasina 23 taona, sy Joel 21 taona no nahiditra hopitaly eny amin'ny HJRA, voan'ny bala chevrotine amin'ny tongony sy amin'ny feny.
lundi, 15 mars 2021 12:21
Covid-19 : 5 no lavo omaly alahady
Tranga vaovao 105 no hita tamin'ireo fitiliana 688 natao ny alahady 14 mars 2021. 14 no sitrana, ary 88 no mila fitsaboana mavesatra. Miisa 5 kosa ireo namoy ny ainy.
Grevy Vontovorona : 3 no voasambotra
lundi, 15 mars 2021 11:32
Ankatso : Nidina an-dalambe mitaky bourse ny mpianatra
Nivoaka ny toeram-pianarana ny mpianatry ny sciences, manakan-dalana mitaky vatsim-pianarana dimy volana miampy fampitaovana. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 15 mars 2021 09:51
Grevy Vontovorona : Mpianatra 2 voasambotra
Nanao fitokonana fitakiana ny vatsim-pianarana 4 volana ireo mpianatry ny politekinika Vontovorona, nivoaka ny faritry ny fampianarana, nametraka sakana sy nandoro kodiarana. Tsy ela dia tonga ireo mpitandro ny filaminana, mafimafy ny fomba nadravana ireo mpianatra, 2 no voasambotra.
lundi, 15 mars 2021 08:39
Politeknika Vontovorona : Raikaitra ny fitokonana
Tapitra ny fe-potoana nomen'ireo mpianatra politeknika Vontovorona ny ministeran'ny fampianarana ambony amin'ny famahana ny olana fandoavana ny vatsim-pianarana 4 volana sy ny kojakoja entina mividy fitaovam-pianarana na ny équipement. Nanomboka niverina nitokona ireto mpianatra ireto, ary nivoaka ny faritry ny sekoly, nametraka sakana sy nandoro kodiarana. Mbola milamina aloha hatreto izany hetsika izany, mbola tsy hita eny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana. Milaza izy ireo fa tsy hijanona ny fitakiana raha tsy mivoaka ny calendrier de bourse izay mifanaraka amin'ny volana nianarany. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 14 mars 2021 19:51
Covid-19 : Arahina isan'andro amin'ny TVM ny fivoarany
Arahina isan'andro ao amin'ny TVM indray isaky ny amin'ny 1 ora tolakandro ireo atontan'isa tsara ho fantatra mahakasika ny fianaky ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. 126 ny tranga vaovao ny sabotsy 13 martsa, 3 no nindaosin'ny fahafatesana. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 14 mars 2021 12:47
Antsohihy : Nalefa nody , miandry fitsarana ireo olona voatondro ho nanao fanafihana tao Ankazobetsihay
Nitrangana fanafihana sy fandrobana ka nahavery vary 25 daba, volamena 15g ary vola 2 tapitrisa Ariary tamin'ny tokantrano iray tao Ankazobetsihay, Kaominina Ampandriakilandy, Distrikan'Antsohihy ny volana oktobra 2020 iny. Tsy olona lavitra no nahavanon-doza fa olona ao an-tanàna ihany izay fantatra, hoy ny fanazavana nataon'ireo voatafika.Nametraka fitarainana teo anivon'ny zandary izy ireo. Nanao ny asany ny zandary ka nisambotra ireo voatondro ho nanao fanafihana sy fandrobana ireo. Nakarina Fampanoavana ny raharaha ny 10 martsa 2021 teo. Nalefa nody ireo voarohirohy fa miandry fitsarana amin'ny aprily 2021 izao, araka ny fanazavana. Manahy amin'ny fofon'ainy sy ny amin'ny mety hisian'ny valifaty any an-tanàna ireo niharamboina manoloana io fanapahan-kevitra io ; na izany aza dia mametraka ny fitokisany amin'ny Fitsarana ireo fianakaviana niharamboina.
samedi, 13 mars 2021 18:55
Covid-19 : Namono olona 16 tao anatin’ny herinandro
638 ireo tranga vaovao Covid-19 teo anelanelan’ny 5 hatramin’ny 12 martsa 2021, tamin’ireo fitiliana niisa 2740 natao. Nisy 16 ireo namoy ny ainy tao anatin’io fe-potoana io, raha toa ka 553 no sitrana.655 ireo marary manaraka fitsaboana amin’izao, manerana ny Nosy.
samedi, 13 mars 2021 13:38
Antananarivo renivohitra : Ireo sara aloa raha hitatitra entana, na mpianatra na mpiasa
Manao fangatahana ao amin’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo ireo mpandraharaha misehatra amin’ny fataterana entana, sy ireo mpitondra mpianatra na koa mpiasa. Nampahafantatra ireo tsara ho fantatra mikasika izany ny Kaominina, dia ireo antontan-taratasy ilaina sy ny sarany mifanaraka amin'izay. (Jereo Sary Tohiny)
Page 12 sur 636